Wasiir Dubbe “Imaaraadku wuxuu rabaa in Soomaaliya ay noqoto sida Liibiya iyo Yemen” | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Wasiir Dubbe “Imaaraadku wuxuu rabaa in Soomaaliya ay noqoto sida Liibiya iyo...
Wasiir Dubbe “Imaaraadku wuxuu rabaa in Soomaaliya ay noqoto sida Liibiya iyo Yemen”
Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku eedeysay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta inay faragelin ku heyso Arrimaha Gudaha Soomaaliya,isla markaana ay dalka fowdo ka abuureyso.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbbe ayaa sheegay in tan iyo markii shaqaaqooyinka ay ka dhaceen Magalada Muqdisho ay soo gaarayeen qoraalo kala duwan oo uga imaanayay dalal dhowr ah, kuwaas oo ka hadlayay xaalada kajira Caasimada.
Wasiirka oo Warbaahinta kula hadlay Magalada Muqdisho waxa uu sheegay in Imaaradka Carabta ay soo saareen qoraal mugdi gelinaya midnimada Soomaaliya, ayna aqoonsaneyn dowladda Soomaaliya, kaas oo Imaaraadka ay Dowladda Soomaaliya ku tilmamtay mid kumeel gaar ah.
Waxaa uu sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay dooneyso in Soomaaliya ay noqoto sida dalalka Yemen iyo Libya oo ay kajiraan dowlado rayida ah oo KG ah, sidoo kalena dalka ay ka abuurayaan fowdo & barakac.
“ Qoraalka Imaaraadka waxaa uu cadeynayaa in saraakiisha Arrimaha dibadda imaraadka ay qeyb ka ahaayeen dibindaabyada sanadihii la soo dhaafay lagu haayay Soomaaliya, taas oo sicad uga hor-imaaneysa qeynuunka Caalamiga ah, waxaan waqtiga loo baahdo iyada oo cadeymaheeda wadata soo bandhigi doona hay’adah qusyeso ayuu yiri” Wasiir Dubbe.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in warqadaan kasoo baxday imaaraadka ay Soomaaliya xasuusisay maalmihii la saxiixay heshiiskii doorashada ee 17-kii September in qaar kamid ah mas’uuliyiinta saxiixay heshiiska ay u safreen imaraadka, dibna ugu soo laabteen, iyaga oo wata shuruudoc cusub wata marwalbana keenaya colaado cusub.
Ugu dambeyn Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay fahmaan waxa lala damacsan yahay oo ah in uu dhaco dagaal sokeeye si dhulkooda iyo baddooda oo hadaba muran la geliyay.